Korintofo I 2 NA-TWI - Kristo ho asɛnka wɔ asɛnnua so - Bible Gateway
Korintofo I 1Korintofo I 3
Korintofo I 2 Nkwa Asem (NA-TWI)
2 Anuanom, bere a mebaa mo nkyɛn bɛkaa Onyankopɔn ho ahintasɛm a ɛyɛ nokware kyerɛɛ mo no, manka asɛm a ɛkyere adwene anaa nyansa a ɛtra so mu. 2 Meyɛɛ m’adwene sɛ bere a me ne mo wɔ hɔ no, mɛma me werɛ afi biribiara gye Yesu Kristo nko na ne titiriw no, ne wu wɔ asɛnnua no so no. 3 Enti bere a mebaa mo hɔ no, na meyɛ mmerɛw a ehu ne ahopopo aka me. 4 Na me nkyerɛkyerɛ a mekyerɛkyerɛe no nso mannyina anyansasɛm ne nnipa adwene so na mekyerɛkyerɛe na mmom menam kasa pa so daa tumi a ɛwɔ Onyankopɔn Honhom Kronkron no mu no adi. 5 Enti mo gyidi nnyina onipa nyansa so na mmom egyina Onyankopɔn tumi so.